मदिरा सेवन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना
मङ्गलबार, ०४ कार्तिक, २०७७
३५ वर्षमा मानव मस्तिष्क शक्तिशाली, ४५ वर्षपछि क्षमता घट्ने
आईपीएल : धवनको शतकमा दिल्लीले पञ्जाबलाई दियो १६५ रनको ‘टार्गेट’
युनाइटेडसँग बदला लिने पीएसजीको दाउ
विराटनगरमा १ सय बेडको नागरिक ‘केयर सेन्टर’ बन्ने
कोशी समाचार – ४ कत्तिक २०७७
संक्रमितको उपचार गर्न केन्द्रले हात उठायो, प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क
जनता समाजवादीको संघीय परिषद् अध्यक्षमा डा. भट्टराई
संक्रमितको उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालमा बेड छैन, निजीमा दैनिक शुल्क कति ?
‘बधाई हो’ को सिक्वेल ‘बधाई दो’ बन्ने, राजकुमार र भूमिको मुख्य भूमिका
नेयमारलाई रोनाल्डोको यस्तो सन्देश
बुधबार, २५ भदौ, २०७६ 0प्रतिक्रिया
जाजरकोट २५ भदौ । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर नलगाड नगरपालिकाले मदिरा नियन्त्रण शुरु गरेको छ । नगरपालिको सबै वडामा अवैध रुपमा मदिरा सेवन गर्ने तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई १० हजार जरिवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
एकै व्यक्तिले पटक–पटक मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा दुबैलाई जरिवाना हुने कार्यविधि बनाएको हो । मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्नेलाई पहिलो पटक १ हजार धेरै पटक गरेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मदिरा बिक्री वितरणलाई सहयोग गर्नेलाई समेत जरिवाना गरिने भएको छ । इजाजत नलिएर मदिरा बिक्री वितरण गरेमा पहिलोपटक ३ हजार हजार र पटक–पटक गरेमा ५ हजार रुपैयाँका दरले कारवाही गरिने बताइएको छ । अठार वर्ष नपुगेको व्यक्तिले मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवन गरेमा सर्वसाधारण भन्दा दोब्बर जरिवाना गरिने छ । मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरण गरेको सूचना दिनलाई बिगो अर्थात सजायको १० प्रतिशत रकम बढाएर पुरस्कार दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मदिरा बिक्री वितरण गर्ने इजाजत लिएको व्यक्तिले बिक्री गरेको परिणाम, लिने व्यक्तिको नाम समय र मिति उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले बताए । अहिले कार्यविधिमाथि स्थानीयको सल्लाह सुझाव लिने काम भएको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै ठाउँमा कार्यविधिका सम्बन्धमा स्थानीयको सल्लाह, सुझाव लिने काम चलिरहेको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए ।
प्रदेश १ मा संक्रमितको संख्यामा रेकर्ड, आठ जनाको मृत्यु